कसले फुटायो एमाले ? ओलीले कि सापकोटाले ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
कसले फुटायो एमाले ? ओलीले कि सापकोटाले ?
एमाले किन विभाजित भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन राजनीतिक जोडघटाउका अप्ठ्यारा र लामा इतिहासहरू केलाइरहनै पर्दैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘भाइरल’ भएका माथि उल्लेखित सोही पार्टीका अध्यक्ष ओली र नेतृ झाँक्रीका अभिव्यक्तिले नै सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अध्यक्ष ओलीले बारम्बार संविधान उल्लङ्घन गरेकै हुन् भनेर त स्वयम् सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फैसला नै सुनाएको छ । संसद् विघटन गर्दा मात्र होइन, स्वयम् एमालेकै बैठक राख्दा, कार्यसमिति थपघट गर्दा र कार्यविभाजन हेरफेर गर्दा समेत ओलीले संविधान, कानुन र पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित गर्दै पार्टीका कयौं गतिविधि समेतमा सर्वोच्चले रोक नै लगाइदिएको थियो ।
‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनेर स–साना त्रुटि–कमजोरी हुँदा समेत निरक्षर एवम् गरिब सर्वसाधारण नागरिलाई चर्को जरिवाना तिराइन्छ, उठिबास लगाइन्छ । अन्जानमा स–साना भूल गर्न पुग्दा ‘कानुन उल्लङ्घन गरेको’ आरोपमा वर्षाैंवर्ष कैद सजाय भोग्न विवश छन् सर्वसाधारण नेपाली नागरिक ।
तर, तिनै गरिब जनताले गाँस कटाएर तिरेको राजस्वबाट तलब–भत्ता र सुविधा खाँदै संविधान र कानुनको ‘संरक्षक’ कै भूमिकामा रहेका अनि संविधान–कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नै आफ्नै हातमा लिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार संविधान–कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहँदा तीचाहिँ ‘अपराधी’ ठहर्दैनन् ? तीमाथिचाहिँ दण्ड–जरिवाना र कैद सजाय हुनु पर्दैन ? उल्टै अरुलाई थर्काएर र अझै राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर दादागिरी गरिरहने छुट कसरी पाउँछन् तिनले ? कि तीमाथि र सोझासिधा गरिब जनतामाथि लागू हुने संविधान र ऐनकानुनहरु नै बेग्लाबेग्लै छन् ?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संसद् इत्यादिका मामला कुनै व्यक्तिविशेष र दलविशेषका निजी मामला होइनन्, आम जनता र सिङ्गै राष्ट्रका सरोकार हुन् । कानुन–नियम मानेर या छलेर तिनले खर्चने खर्बौं रकमको स्रोत पनि सोझासिधा र गरिब नागरिक नै हुन् । बेला–कुबेला उनीहरूले मच्चाउने वितण्डा, लाद्ने कुशासन र गर्ने व्यभिचारको मार खपिरहन अभिशप्त मान्छे पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।
त्यसैले यतिबेला सिङ्गै राष्ट्रले सोधिरहेको छ– ‘कसले फुटायो एमाले ? अध्यक्ष ओलीले कि सभामुख सापकोटाले ?’ तथ्य र तर्कसहित यसको जवाफ दिने मुख्य दायित्व अरू कसैकाे नभई स्वयम् खड्गप्रसाद ओलीकै हो ।